Gollaha Wasiiradda oo liiska argagaxisadda ka saarey ONLF | KEYDMEDIA ENGLISH
Gollaha Wasiiradda oo liiska argagaxisadda ka saarey ONLF
Gollaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, ayaa meesha ka saaray gabi ahaanba, in ururka ONLF uu yahay mid argagixiso ah, taas oo waxba kama jiraan ku tilmaameysa, qaraar ay xukuumadii kheyre 2017, ururkaasi ugu aqoonsatay argagixiso.
MUQDISHO, Soomaaliya - Gollaha wasiirada xukuumada xil-gaarsiinta ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay, kulan ay arrimo kala duwan ku lafa gureen, waxaana kulanka maanta shir gudoominayey Ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble.
Arrimihii ugu cuslaa ee maanta lagu gorfeeyey kulanka ayaa waxaa ka mid ah, dhiibistii qalbi dhagax, loogu gacan galiyey itoobiya, iyo ururka ONLF ay xukuumaddii xiligaas u aqoonsatay argagixiso.
Gollaha waxey isku raaceen, in dhiibista qalbi dhagax ay ka hor imaaneyso qoddobka 36-aad ee dastuurka kaas oo mamnuucaya, in qof loo dhiibo dal kale, haddii aanu jirin heshiis si cad u fasaxayo isu dhiibista.
Gollaha wasiiradda ayaa gabi ahaanba meesha ka saaray, qaraarkii ay xukuumaddii Kheyre sanadkii 2017-kii, ugu aqoonsatay ururka ONLF, mid argagixiso ah, waxaana gollaha ay ka raalli galiyeen ururka arrintaasi.
Billowgii September 2017, Xukuumaddii Kheyre, ayaa sheegtay in Qalbi Dhagax uu ahaa shakhsi ku howllanaa falal liddi ku ah ammaanka Soomaaliya iyo Itoobiya, iyagoo u gacan galiyey dalka Itoobiya, waxaana ururka gobanimo doonka ee ONLF ay u aqoonsadeen mid aragagixiso ah.